प्रतिक्षाको मेरो जिन्दगी – पुरुशोत्तम सुबेदी -बेल्जियम :: a1nepal.com.np
प्रतिक्षाको मेरो जिन्दगी – पुरुशोत्तम सुबेदी -बेल्जियम
– पुरुशोत्तम सुबेदी -बेल्जियम
दुल्हन फर्काएर हो गएको, एघार बर्ष भयो कागत बनाएर आउछु भनेका छन् । लोग्ने बिनाकी बुहारी कसैसँग हाँसे पनि बोले पनि घरमा रिस गर्छन् । दाजुले फोन नगरे पैसा नपठाए नन्द मै माथि जाइ लाग्छिन । छोराले हप्ता दिन फोन नगरे सासु पनि शंका काट्छिन ।आफ्नो पोई लाई प्वाओ कमाउने अर्ती दिएकी होली नि ?
विवाह हुँदा म २२ बर्षकी थिएँ, अहिले त म सात कम २ बिसकी पुगें । बल्ल बल्ल सासु संग भन सुन गरेर माइत हिंडेकी -आज भाईको छोरा भतिजाको बर्तवन्ध हो रे । भरे तुरुंन्तै फर्कनु छ, देवरको छोरालाई बोडिंङबाट ल्याउनुपर्छ चारै बजे आइपुग्नु पर्छ । अस्ती फोन गरेका थिएँ । मंसिर सम्ममा आइपुग्छु भनेका छन् । कुन्नी त्यसो भन्न लाएको ३ बर्ष भयो । खै मलाई त पत्यार पनि लाग्नै छोड्यो ।
आफुलाई राम्रो लागेको साडी लगाएर हिंडे पनि कुरै काट्छन पोइले विदेशबाट कमाएर पठाइदिएको छ र खुब लगाउने भएकी छे आदि आदि । हा – मलाई त यही घरेलु नै मनपर्छ । चप्पल पनि छिनेको थियो, खाली खुट्टामै छु । बैंस त चालै नपाई गइसक्यो के को चप्पल ?
चाडपर्व आउँदा पनि खुशी लाग्दैन । पोहोर साल तिजमा लिन बा आएका थिए, जान दिइनन सासुले । ४ वटा त भैंसी छन सबै मेरै थाप्लोमा हो । कहिलेकांही त घांस काट्दा काट्दै टोलाएर आफु कहाँ छु थाहै नहुने, घांसको सानो भारी देखे सासुको मुखै बांङो देखिने । मेरो श्रीमानले कमाएर नपठाए यो घर को छाकै टर्दैन । तै पनि म कति हेला भएकी । सासु पनि महिना महिनामा मेरो कोठामा छिर्छिन । पोइले कन्ना पछाडि केही पठाएको पो छ की यसलाई ? राती पनि चिओ गर्छिन कतै गइकी कि भनेर । पानी लिन जांदा पनि कौसीबाट हेर्छिन रे । रोपाइका खेताला तिर पनि हेरेर शंका काट्छिन । आखिर के को बन्धन हो, मलाई यस्तो ? म उनको छोराको सपना सजाउन आएकी । आखिर म गोठाली मात्रै भएँ ? पल्तिरको जयन्द्रेसंग के कुरामा हो कुन्नी म एक दिन हांसेकी थिएँ सासुले कुरो लाइछन लोग्ने एक महिना बोलेनन् ।
मलाई पनि कुरा लगाउनेको ताँती नै छन नि । म त पत्याउन्न । खैरिनी ल्याएर बसेका छन रे भन्छन । खै के हो – के हो – दुल्हान फर्काएको भोलिपल्टै हिंडेका हुन । मैले त राम्रोसंग अनुहार पनि हेर्न कहाँ पाउकी थिएँ र ? मन त दयालु होला जस्तो लाग्छ । ढिलो भएपनि उनी एकदिन आउँछन् ।
← अनुपम सुन्दरताको धनी सुन्दरीजलको मेरो अविस्मरणिय यात्रा-चकेन्द्र राई	“मेरी लक्ष्मी भाउजु”- संगिता घिमिरे, ललितपुर →